Nnukwu ahịa Ewu na Egwu na Nhazi Kaadị
Inye aka na ahia ahia ahia na nhazi igba kaadi ugwo di egwu
A akaụntụ ahịa azụmaahịa dị egwu na-abụkarị otu na-ere ahịa akaụntụ. Nke ahụ bụ, mmadụ na-eji akaụntụ akụ mba ofesi hazie kaadị akwụmụgwọ ma nata ihe nrịgo. N'ụzọ ahụ, ịnwere ike iwepụta ego na akaụntụ azụmaahịa gị dị n'okirikiri. Ọzọkwa, ndị na-azụ ahịa kaadị akwụmụgwọ nwere ike ịdebanye aha onye ọ bụla na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nzukọ ọ bụla dị ka azụmaahịa "nnukwu ihe egwu". Ya mere, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi ahụ chọrọ ka ị gosipụta akaụntụ ahịa ahịa kaadị akwụmụgwọ dị oke egwu.
Companieslọ ọrụ na - akwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ na-eme nke a na ntinye akwụkwọ maka ọtụtụ ebumnuche. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike hazie azụmaahịa nwere nnukwu nkwụghachi ụgwọ dị ka nnukwu ihe egwu. Na mgbakwunye, anyị ahụla ka ha na-ajụ ngwa n'ihi na onye anamachọ ma ọ bụ ụdị azụmahịa ahụ erughị usoro nyocha ọ bụla siri ike. Ọ bụrụ na nke a bụ gị, ọ nwere ike ibute ụlọ ọrụ nhazi kaadị akwụmụgwọ azịza dị oke egwu.
Usoro Nhazi Kaadị na Banking Banking
Mgbe ị na-arụ ọrụ na onye na-eweta kaadị akwụmụgwọ nke amaara na akaụntụ ngwa ahịa dị oke egwu, o yikarịrị ka ha ga-akwado ngwa gị. Nke a, nke a gụnyere mbupụ ala na akaụntụ ahịa ahịa ndị ọzọ.
Ọnụahịa Ego Banyere Akaụntụ Banyere Akaụntụ
Ọtụtụ mgbe, ndị na-azụ ahịa n'ihe ize ndụ ga-akwụ ụgwọ dị oke egwu. Agbanyeghị, anyị achọpụtala na anyị chekwaa 98% nke ndị na-ere ahịa na ụgwọ nhazi maka ihe ha na-enweta ugbu a. Nke a bụ ikpe ma ha nwere mkpa dị ala, ọkara ma ọ bụ nke dị elu. Kpachara anya n'ihi na e nwere ọtụtụ ndị na-eweta akwụkwọ ga-anabata ndị na-achọ akwụkwọ na nkwanye ugwu na oke oke. Ya mere, na-elele nkwekọrịta gị mgbe niile ma hụ ma enwere ụkpụrụ iji belata ọnụego azụmahịa ahụ. Dịka ọmụmaatụ, nchekwa buru ibu, nkwekọrịta nchekwa na ụdị ndị ọzọ belata ihe egwu nwere ike inyere onye na-achọ ọrụ inweta ọnụego kachasị mma enwere ike.
Enwere m ego maka Akaụntụ Banyere Akaụntụ Banyere?
Ndị na-azụ ahịa nwere ike ịkọ azụmaahịa dịka nnukwu ihe egwu n'ihi ụlọ ọrụ ya. Onye nwe ya nwere ike inweta kredit mma. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ azụmahịa nke mba ọzọ na azụmahịa n'ime US nwere ike ịnweta azụmahịa ahụ. N'aka nke ọzọ, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ike bụrụ ihe iwu megidere n'ụkpụrụ iwu obodo, nke steeti ma ọ bụ nke gọọmentị etiti. Ọbụna ire ahịa a na-enyo enyo ma ọ bụ ụzọ ire ere nwere ike ịme ka mmadụ daa. Ya mere, nye ọtụtụ azụmaahịa, akaụntụ azụmaahịa a na-ere ahịa bụ naanị nhọrọ iji hazie kaadị akwụmụgwọ n'ịntanetị. Iji nwee otu, ọtụtụ ndị na-ere ahịa chọrọ ka ị nwee mpaghara akụ nke obodo. Nke ahụ pụtara ịtọlite ​​ma ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ndị dị n'ụsọ na akaụntụ.
Ulo oru nke choro ka ego ahia ahia
Otutu ndi mmadu kwenyere na akaụntụ ahia ha di elu bu ihe ozo maka casinos ma obu ogwu. Agbanyeghị, na ntuziaka ịgbazinye ego taa na ihe ndekọ ego chọrọ, ọtụtụ ụdị ịtụkwasara obi na azụmaahịa n'ịntanetị bụ “ihe egwu dị elu.” Ya mere, ha chọrọ onye nrụpụta kaadị akwụmụgwọ pụrụ iche. Ndị a bụ ụdị azụmaahịa nke na-achọkarị akaụntụ ahịa dị oke egwu.
1-800 ụdị saịtị nkata
Ụgbọ ala ụgbọ elu
Amazon, Yahoo ma ọ bụ ụlọ ahịa Google
Ndị na-erekwa ụgbọala
Ndị ọka iwu na-akwụ ụgwọ
"Ulo oru ahia"
Cha cha, ịgba chaa chaa ma ọ bụ ịgba egwu
Lelee ọrụ ego
Cigarette ma ọ bụ na-ere sịga ma ọ bụ ngwaahịa nicotine
Ego, ego a na-anakọta ma ọ bụ ihe nchịkọta nke onwe
Ụlọ ọrụ nchịkọta
Kupọns ma ọ bụ usoro ọrụ ụgwọ ọrụ
Ebe nkwụghachi ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ nrụzi & ndụmọdụ gbasara ụgwọ
Nlekọta ahụike na nlekọta ahụike
Usoro ọgwụ ọjọọ
Ụlọ ahịa eBay
E-Books (ihe odide copywritten)
Ndị na-eme ego na-emepụta ego (ndị a na-edeghị aha na ndị na-abụghị ndị a na-edebanye aha (ya bụ ndị ahịa ahịa Stub Hub)
Ọrụ mbupụ (na-abụghị nke US)
Fantasy egwuregwu na ebe nrụọrụ weebụ
Ndị na-ere ahịa na Federal Firearms License (FFL)
Onye na-ere ego, ọrụ ego ma ọ bụ ọrụ mgbanwe ego
Inye ego na-aga n'ihu (ntụgharị ụzọ iji chekwaa ego site na ịkụnye ego gị eletrik.)
Atụmatụ ego, atụmatụ ma ọ bụ ndụmọdụ
"Nweta akwụkwọ ngwa ngwa", mmemme, wdg
Ọnụ tiketi dị elu
"Olee otú" Iji tinye ebe nrụọrụ weebụ (ntụgharị "Mụta Ihe-Iji Mee Ego n'Intanet")
Ihe omuma, astrology or psychic services (dika ndi ozo ajuju)
Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ "Hype"
Ndị na-agwọ ọrịa ma ọ bụ hypnosis
Ndị ahịa ụwa (ndị na-abụghị ndị United States)
Ụgbọ njem mba, ibu ma ọ bụ mbubata / mbupụ
Ụlọ ọrụ ntinye ego
Atụmatụ itinye ego na akwụkwọ nyocha
Ọrụ ndị na-ede akwụkwọ ọka iwu
Azụ ahịa ụlọ
Ahịa ahia na ndebanye aha
Òtù ndị otu (karịa ọnwa 12)
Ndị ahịa na ejedebe faịlụ ahịa (ndepụta TMF)
Ụlọ ọrụ mmezi
Ahịa dị iche iche (MLM)
Egwú, ihe nkiri, nbudata ngwanrọ ma ọ bụ bulite (ntụgharị faịlụ e dere ede, ihe nkiri ma ọ bụ ngwanrọ (nchịkwa ọrụ Microsoft)
Ụmụ amaala na-abụghị ndị US
Kpochapụ ala akuku. ọrụ ụlọ ọrụ
Pawn ụlọ ahịa
Kedu kaadị akwụ ụgwọ
Ọrụ a na-ejikọta ma ọ bụ ọrụ telemarketing
Ntughari aka, ese, wallets, ugogbe anya maka anwụ wdg? (ịkụ aka-apụ)
Nchebe onwe onye, ​​ose ose, nwanyi, wdg.
Ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'Ịntanet? Facebook, Twitter, MySpace etc.
Ịkọ ntụrụndụ ma ọ bụ nkwụsị ịme / ịkụ nzọ
Ụlọ ọrụ aghụghọ
Ụlọ ọrụ ekwentị
Nhazi nke atọ, ndị na-azụ ahịa ahịa (dịka ndị nhazi ịkwụ ụgwọ, ndị na-akwụ ụgwọ ezumike ezumike)
Mgbasa oge ma ọ bụ mgbasa ozi nke oge
Ndị na-eme nlegharị anya
Ọrụ njem na ụlọ ọrụ njem
Ebe obibi (ọ gwụla ma ihe onwunwe bụ nke onye ahịa)
Nri vitamin ma gbakwunye ahịa? ọgwụ nri, ọgwụ ndenye ọgwụ, mgbakwunye ahụike, ahịa ọgwụ
Ụlọ ọrụ ịgba akwụkwọ ndị ọzọ
Ngwá agha ọ bụla: egbe, mma, egbe na-apụta, ma ọ bụ ammo. Gụnyere akụkụ nke ngwa ọgụ (ya bụ butts, triggers, magazin, wdg).
Nkwanye Taxtụ Isi
Dị ka ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ bank na akaụntụ na-ere ahịa, ọ dị gị mkpa ịnọgide na-arụ ọrụ tax nnabata. Iji maa atụ, ndị nọ na US, UK, Canada, Australia, na ọtụtụ mba ndị ọzọ na-atụ ụtụ zuru ụwa ọnụ. Yabụ, jide n'aka na ị ga-enwe ndụmọdụ ụtụ isi dị mma site n'aka ọkachamara ụtụ isi.
Etu ị gha esi melite Akaụntụ Mgbapụta Ewu
Mgbe ị gụchara nke a, ị chere na nnukwu ọnaghị ahịa dị n'okirikiri azụmaahịa dị mma maka gị? Ọ bụrụ otu a, biko jiri nọmba ekwentị ma ọ bụ mpempe ndụmọdụ na ibe a. You mechaa, gị na ndị ọkachamara nwere ike inye gị ozi ndị ọzọ.
<Isi nke 8
Isi nke 10>